UKhuzani uzosebenza nentokazi yakwaHlabisa | News24
UKhuzani uzosebenza nentokazi yakwaHlabisa
Durban - Uthole ithuba eliyinqayizivele umculi wakwaHlabisa njengoba ethole izipho ezinkulu ezimbili ngesikhathi esisodwa.
Kufezeke iphupho likaZinhle "Tsunami" Mdluli, 19 uthengelwe wuMasipala wakwaHlabisa isiginci sikanokusho.
Umasipala wakulendawo umthengele isiginci kanye nomshini wokusabalalisa umsindo konke okubize u-R35-000. Lena ngeye yezinhlelo zokusiza intsha yakulendawo ngokuthi umasipala ungenelele ngokuxhasa ngabakudingayo.
Le ntokazi eyenza ibanga leshumi ishaya ushuni wamadoda kumculo kaMaskandi kanti futhi izoqopha ingoma nomculi kaMaskandi oyintandokazi uKhuzani “idlamlenze” Mpungose.
UMdluli ujabule ngendlela naye engeke aze ayichaze, njengoba emasontweni adlule wayekuKhozi FM ohlelweni luka Bongani Mavuso ekhuluma ngezingqinamba ahlangabezane nazo kulomkhakha womculo.
Uthi akakwazi ukulinda ukuqopha ingoma nalesihlabani sikamasikandi esesibizwa ngenkosi yomaskandi njengoba ewole zonke izindondo ezithathwa njenzimqoka emculweni kamasikandi emcimbini waMantshontsho kaMasikandi Awards ngoMgqibelo ebusuku.
Ubonge kakhulu uBhodobhodo owayedlalela indidane isiginci ngokuthi amfundise sidlalwa kanjani, uthi bahambe imicimbi eminingi wafunda khona okuningi ngesiginci.
"Ngiyabonga kumkhandlu nehhovisi leMeya abangithatha bangihambisa oKhozini baphinde bangithengela isiginci, iphupho lami ukuthi ngifinyelele ezingeni likaKhuzani ngoba vele isitayela sami esezinkabi," kusho uTsunami.
IMeya uVelenkosini Hlabisa ithi bafezekisa isithembiso abasenza kuqala unyaka ukuthi bazothuthukisa ezobuciko, ezemidlalo, ezokuvakasha, ezemfundo nezamabhizinisi kakhulukazi entsheni.
"Sinesikhwama semali ebhekele ezemfundo esingu R1,3 Million. Siqalile ke ngokuthi sixhase abafundi abayofunda emanyuvesi ngesamba semali engu R800 000."
"Sathatha R300 000 saxhasa labo abangakwazanga ukuthi baye emanyuvesi ukuthi bafunde ekolishi, manje ngoMeyi sizoxhasa ngoR200 000 labo bafundi abangaphasanga kahle ngokubenzela izincwadi zokushayela," kusho imeya uHlabisa.
Uphethe ngokuthi bona bayakholelwa ekutheni ithalente lomuntu lihambisana nemfundo Futhi baxhasa wonke umuntu ngokungachemi napolitiki.